ILa Niña ingaba buthakathaka impela ezinyangeni ezizayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izimo zezulu, Iziphepho zaseTropical
Iningi labantu liyazi isimo se- I-El Niño. Nokho, Intombazane futhi inomphumela oyinkinga kubantu futhi ayaziwa kangako emphakathini.
ILa Niña iyisimo sezulu esithi, njengo-El Niño, siyingxenye yomjikelezo wemvelo wesimo sezulu emhlabeni. Ingane nayo ibizwa ngokuthi Ama-Oscillation aseNingizimu. Lo mjikelezo unezigaba ezimbili: isigaba esifudumele lapho sino-El Niño nesigaba esibandayo lapho sineLa Niña. Kepha zehluke kanjani?
Nini imimoya yokuhweba Zishaya ngamandla zisuka entshonalanga, amazinga okushisa enkabazwe nendawo ezungezile ayancipha, ngakho kuqala isigaba esibandayo esibizwa ngeLa Niña. Ngokuphambene nalokho, lapho amandla emimoya yezohwebo eba buthakathaka, amazinga okushisa olwandle akhula futhi isigaba esifudumele esibizwa ngokuthi i-El Niño siyaqala.
Lezi zimo zidala ushintsho emibusweni yemvula yazo zonke izifunda ezishisayo izinyanga ezimbalwa futhi lezi zinguquko ziyashintshana ngezikhathi ezingashintsha phakathi kweminyaka emihlanu kuya kweyisikhombisa.
ILa Niña ibe nemiphumela emibi ezindaweni ezahlukahlukene zomhlaba ngo-2015 nasezinyangeni zokuqala zika-2016. Kodwa-ke, ngokusho kwe- Inhlangano Yezwe Yezulu (WMO) lo mkhuba uzobe ungathathi hlangothi noma ubuthakathaka ezinyangeni ezizayo. Kubikwa ukuthi kukhona phakathi Ama-50% no-65% amathuba ukuthi iLa Niña ibuthakathaka phakathi nezinyanga ezintathu zokugcina zika-2016 nezinyanga ezintathu zokuqala zika-2017.
Lezi yizindaba ezinhle kakhulu ngemuva kwezehlakalo zesimo se-El Niño ngonyaka odlule nasekuqaleni konyaka. Kube njalo UNiño onamandla kakhulu owake waqoshwa futhi yingakho amazinga okushisa aphakeme kakhulu aqoshwe emhlabeni jikelele. Lezi zimo zesimo sezulu ziyizigaba eziphikisanayo zokuxhumana phakathi komkhathi nePacific Ocean, yingakho zibangela imiphumela ehlukile kwesimo sezulu ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » ILa Niña ingaba buthakathaka impela ezinyangeni ezizayo
eSpain intombazane ithinta kanjani
Empeleni, yize kwenziwa izifundo eziningana ngale ndaba, futhi ezinye zikwazile ukuxhumanisa ngokwezibalo ukwanda kwemvula kweminye imiphakathi nale nto, iziphetho azinaso isisindo osifunayo. Ngakho-ke, eSpain akukho ukuxhumana neLa Niña.